सुध्रेकै हो त महिलाको अवस्था ? « dainiki
१ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:०७
सुध्रेकै हो त महिलाको अवस्था ?
पितृसतात्मक समाजले निर्माण गरेको धर्म, संस्कार, व्यवहार, मनोविज्ञान तथा त्यसका सञ्चालनबाट निर्माण भएका सामाजिक कुसंस्कार, लैंगिक विभेदको कारणले परिवार, समाज, राष्ट्र एवम् अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमै अवसर, भूमिकामा विभेद हुने गरेको छ । विगतका विकास विद्हरुले महिला र पुरुष बीचको भिन्नतालाई खासै दृष्टिगत गरेका थिएनन् । महिला र पुरुष दुवैलाई समानरूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो र समाजमा जब आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया बढ्दै गयो तव समाज आधुनिकीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ । तत्पश्चात महिला एवम् पुरुष दुवै समान रूपमा लाभान्वित हुन्छन् भन्ने मान्यता थियो । तर, विकासको आधुनिकीकरण प्रक्रियाबाट महिलाहरूलाई विभेद गरिदा विकास प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने कुरा सन् १९७० को दशकमा भएको अध्ययनपछि देखियो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक जस्ता क्षेत्रहरु तथा व्यवहारमा महिला र पुरुष बीच रहेको असमान अवस्था नै लैगिक खाडल हो । यस्तो प्रकारको समाजको खाडललाई बर्गिय चिन्तनले समेत संरक्षण गरेको हुन्छ ।
विश्वका अधिकास देशहरुले समाजमा यस्तो किसिमको विभेद हटाउने प्रतिबद्धता गरेको भएता पनि यसलाई निमिटयान्न पार्न भने सकेको छैन । त्यसको एक उदाहरणको रुपमा नेपाली समाजलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा सयौबर्षदेखि चल्दै आएको सामान्ती सस्कार र त्यसले सिर्जना गरेको विभेदका कारण लैगिक खाडल कायमै रहेकोछ । नेपाली महिला माथिको शोषणको रुपमा कान्तिपुर दैनिकमा सुमिना मातृत्व उत्सवः अश्लीलता या क्रान्ति भन्ने लेखमा लेख्नुहुन्छ “सामन्ती समाजले अनुशासन र मर्यादाका नाममा महिलाको शरीरलाई सधैँ निषेधित घोषणा गरी शिरदेखि पाउसम्म ढाकछोप गर्नुपर्ने प्रावधान स्थापित ग¥यो । फेरि पुँजीवादले स्वतन्त्रताको ‘स्याम्पल’ देखाएर विशेष महत्त्वका साथ नाङ्गिन प्रोत्साहित गर्न थाल्यो । पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित जुनसुकै युग पनि महिलामाथि आफ्ना नीति, नियम र निर्देशनहरूको लगाम लगाउन कतै चुकेको छैन” यो भनाईलाई आधार मान्दा पनि नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने दष्टिकोण कस्तो छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता विभेदका अनगिन्ति परिघट्नाहरु नेपाली समाजमा जिवित छ । तथापिय विभेद न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरु भने नभएका होइन ।
विभेदलाई अन्त्य गर्न महिलाको अधिकार सहित जारी भएको नेपालको नयाँ सविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको बागजुत पनि समतामूलक समाज निर्माणको कार्य पूरा गर्न सकिएको छैन । सविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ भने विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि समावेशीकरण नीतिलाई आत्मासाथ गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ र बेइजिङ कार्यपत्र लगायत अन्य विभिन्न महिला अधिकार सम्बन्धी संयन्त्रको पक्ष बनी महिलाविरुद्ध हुने विभेदको अन्त्य र लैङ्गिक समानताको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मुलुकी संहिता लगायत विभिन्न कानून तथा नीतिगत व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप कसुर र सजायं ऐन २०७२, श्रमजिवी महिलाहरु प्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६३, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ को व्यवस्था, जस्ता कानुनी व्यवस्था लागू भई कार्यान्वयनमा छ । साथै पन्ध्रौ योजनामा यसलाई सुखको राष्ट्रिय लक्ष्यभित्र राखेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
यी व्यवस्थाको बागजुत पनि नेपालमा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर छ । हुनता बषौदेखि चलिआएको विभेदकारी नीतिले सिर्जना गरेको यो खाडललाई हटाउन समय लाग्छ नै । त्यस्ता विभदेको खाडललाई पुर्ने दिशामा नेपाली समाज अघि बढेको कुरा केही तथ्यबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । मानव विकास सूचकाकंको प्रतिवेदन सन् २०२० लाई हेर्दा नेपालको मानव विकासको प्रवृत्ति सुधारउन्मुख छ । सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांकको ०.३७८ भएकोमा यो अंक सन् २०२० आइपुग्दा ०.५७९ पुगेको छ । यो विगत भन्दा ५३ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२० को मानव विकास सूचाकांकमा नेपालीको औसत आयू ७०.५ बर्ष छ भने औसत विद्यालयमा अवधि ५.२ बर्ष रहेकोछ । त्यसैगरी औसत प्रतिव्यक्ति आय (पि.पि.पि) को आधारमा २७४८ अमेरिकी डलर देखाएको छ । यो अवस्थाले नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारउन्मुख देखिन्छ । त्यसमा पनि महिलाको मानव विकास सूचाकांक ०.५४९ र पुरुषको ०.६१९ रहेको छ । लैगिक विकास सूचाकांक ०.८८७ छ । औसत आयु महिलाको ७१.९ बर्ष छ भने पुरुषको ६९ बर्ष छ ।
महिलाको औसत विद्यालयमा पढ्ने अवधि ३.६ बर्ष छ भने पुरुषको ६.४ बर्ष रहेको छ । त्यसैगरी महिलाको प्रतिव्यक्ति जि.एन.आई २११३ रहदा पुरुषको ३५७० अमेरिकी डलर छ । महिला साक्षरता ५७.७ प्रतिशत हुदा जहा पुरुषको साक्षरता दर ७५.६ प्रतिशत छ यो विगतको भन्दा सुधारिएको अवस्था हो । महिलाको सम्पति माथीको पहुच बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ र निरन्तर बढ्दै आएको छ । महिला र पुरुष रोजगारीमा सहभागिता दर क्रमशः ३७.३ र ६२.७ प्रतिशत छ । महिला र पुरुष बेरोजगार दर क्रमशः १३.१ र १०.३ प्रतिशत छ । यो सूचकले महिलाको अवस्था सुधारउन्मुख भएको देखाउछ । ग्लोबल जेन्डर ग्याब रिपोर्ट २०२० का अनुसार १५३ देशहरुको सूचीमा नेपालको अवस्था ०.६८० अंक सहित १०१ औ स्थानमा छ । यो अवस्था सार्क देशहरुमा मध्ये दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी बंगालादेश ५० औ, श्रीलंका १०२, भारत ११२, मालदिव्स १२३, भुटान १५१ स्थानमा रहेको छ । यो सवै तथ्यहरुले नेपाली महिलाको अवस्था सुधारको दिशामा अघि बढेको देखाउदछ ।
अझ यो सुधारको गतिलाई तिव्रता दिनको लागि शिक्षा नै आधारभूत पक्ष भएकोले महिला शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । यसको अलाव समाजको साथ सहयोग र सचेतनासंग सगै लान सकिएन भने हाम्रो समातामूलक समाज निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउन कठिन हुन्छ । त्यसकारण पनि नेपाली समाजमा रहेको महिला माथिको विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अग्राधिकारको आवश्यक छ । महिलाको समविकासको लागि राज्यले गरेको कानुनी पर्यासहरु पर्याप्त नै भएता पनि यसको अन्य कार्यान्वयनको पक्षलाई अझ घनीभूत पार्न पर्छ । त्यसका लागि महिला तथा युवा संजाललाई सशक्त रुपमा परिचालन गर्ने र समविकास तथा सचेतीकरणका लागि थप पहल गर्नु पर्छ ।
नेपालको विद्यमान सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेको महिला माथिको विभेदलाई चिर्नको लागि कानुनी प्रयासहरु नभएका होइन । नयाँ सविधानले महिला र पुरुष वीच समानता कायम गर्ने दिशामा कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्दै गरेकोले महिला माथिको विभेद न्यूनीकरणको संकेत देखिएकोछ । समावेशीकरणको नीतिको अनुशरण गरेपश्चात राजनैतिमा महिलाको सहभागिता बढेको छ । देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति नै महिला बन्न सफल भएको छ । नेपालको सघीय संसदमा ९० जना अर्थात ३२.७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्र्रिय सभामा २२ जना अर्थात ३७.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
प्रदेश संसदमा १८९ जना महिला अर्थात ३४.४ प्रतिशत छ भने स्थानीय सरकारमा १४,३५२ अर्थात ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । ९२ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्ष वा उपमेयर महिला रहेको छ । यो तथ्यले राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा महिलाको उपस्थिति बढेको संकेत गर्दछ । विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना भएका रोजगारीको क्षेत्रमा समेत महिलाको उपस्थिति बढ्न थालेको छ । कुल रोजगारीमा ३७.३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । महिलाले आफू माथि हुने विभेदको खुलेर प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । शिक्षामा महिलाको पहुच बढेको छ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा छात्रको तुलना छात्राको सख्या बढी भएबाट यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
समाजमा महिला माथि हुने गरेको हिंसाहरु तत्काल सामाजिक सन्जाल तथा अन्य मिडियाबाट आउने गरेकोले गर्दा समेत समाजमा दमित भएका महिला विरुद्धको घट्नालाई उजार गर्ने गरी सचेतना बढेको छ । महिलामा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृति तथा राजनैतिक चेतनामा बृद्धि भएको छ । महिलाहरु आफैमा संगठित भई आफ्नो अधिकारको बिषयमा पैरवी गर्न सक्ने भएका छन् । यी र यस्ता गतिविधिको निश्पक्ष मूल्याकंन गर्ने हो भने विगतको तुलनामा महिला माथि हुने विभेदको परिदृष्य घटेको भन्नको लागि हिच्किचिाउनु हुन्न । यो अवस्थाले नेपाली समाजमा रहेको विभेद अन्त्य तर्फ अगाडि बढ्दै छ भन्ने देखिन्छ । यो सुधारको गतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ । यसो भएको खण्डमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:०७